Osimiri Congo: njirimara, nhazi, flora na fauna na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụ ezie na Osimiri Congo Ọ bụ otu n'ime osimiri kachasị mma n'ụwa, ọ bụghị ọdịbendị nke Ebe Ọdịda Anyanwụ chọtara ya na njedebe nke narị afọ nke 1482. N’ezie, ọtụtụ akụkọ malitere na mbata nke ndị Portuguese. Osimiri Congo bụ otu n'ime osimiri kachasị mkpa na maapụ mmiri nke ụwa, mana amabeghị West ruo mgbe XNUMX.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, geology na biodiversity nke Osimiri Congo.
2 Nguzobe nke osimiri Congo
3 Osisi ala na anumanu nke Osimiri Congo
4 Mkpa akụ na ụba
N’okporo ụzọ ya, nke gafere Zambia, Democratic Republic of Congo, Republic of the Congo na Angola, mmetụta nke ịdị ukwuu anaghị adịte aka ma bụrụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa. Ogbu mmiri kachasị omimi n'ụwa bụkwa ebe obibi nke anụmanụ dị iche na iche iche. N'echiche a, Congo ọ nwere ọtụtụ ebe obibi dị iche iche nwere ọnọdụ obibi dị iche iche, nke na-eme ka o kwe omume maka ụdị ụba dị iche iche bara ụba.
Osimiri Africa a bụ nke abụọ kachasị ukwuu n'ụwa, nke abụọ kachasị ogologo na nke abụọ kasị dị omimi na kọntinent Africa ma na-enye gburugburu ebe okpomọkụ nke na-akwado ọtụtụ puku ụdị na mmiri ya. Aha ya sitere na alaeze Congo, otu n'ime obodo ndị kachasị mkpa dị na ndịda Sahara tupu mbata ndị ọbịa.
Osimiri Congo dị na ọwụwa anyanwụ nke etiti Africa, yana mpaghara ọwara mmiri nke ihe dịka 4,01 nde kilomita kilomita. Njikọ mba Congo, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Angola, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Zambia, Tanzania. na Gabon, ọ bụ ezie na ọ bụ n'akụkụ mmiri ụfọdụ ka ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịbanye. A na-eme atụmatụ na ọ dị ihe dị ka kilomita 4.700 n'ogologo ma na-eburu mita cubic 41.000 kwa nkeji nke mmiri., n’akụkụ ụfọdụ n’ihi na ọ na-enwe nkezi nke mmiri 152 cm kwa afọ. Onu ogugu ya gbadara ntakịrị ma o gafere uzo abuo.
Isi iyi nke Osimiri Congo dị mgbagwoju anya dị ka isi iyi ndị ọzọ, ma a na-ekwenye na osimiri ahụ sitere na ugwu ugwu nke East Africa Rift Valley na ugwu ọwụwa anyanwụ Zambia, n’etiti Ọdọ Mmiri Tanganyika na Ọdọ Mmiri Niassa. O nwere ike ịbụ Osimiri Changbei na elu nke ihe dịka mita 1.760. A na-agbanye ya na banana Ocean na Democratic Republic of the Congo. Osimiri ahụ nwere ọdịdị arc, nkewawara na Upper Congo, Central Congo na Lower Congo, nke ndị na-arụ ọrụ dịka Lulonga, Aluwimi, Mongara na Kasai na-eri.
Upper Congo sitere na Nnukwu Ndagwurugwu Rift nke East Africa wee kwụsị na Stanley Falls, na-amalite site na Central Congo ma gaa n'ihu n'ebe ugwu ruo ọtụtụ kilomita.
Na-agafe Kisangani na Democratic Republic of the Congo, osimiri ahụ tụgharịrị gaa n’ọdịda anyanwụ ma n’oge na-adịghị anya ọ na-aga n’ihu na ndịda ọdịda anyanwụ. Njirimara nke akụkụ a bụ na ọ nweghị rapids ma ọ bụ nsụda mmiri, ya mere ọ nwere ike ịnyagharị. Lower Congo na-agafe obodo Kinshasa, site na nke a ọ na-agbasawanye, yana Rapids na mpaghara ụfọdụ.
Nguzobe nke osimiri Congo
Thedị na ọwa nke mmiri nke ise kachasị ogologo n'ụwa akachabeghị. Ọtụtụ n'ime bezin ahụ bụ nsị Mesozoic, kamakwa Achọpụtala ihe ndị dị na Paleozoic na neoproterozoic sediments.
N'ụzọ doro anya, tupu Mesozoic, Congo bụ ụzọ dị elu nke osimiri ọzọ nke na-asọ site site n'ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ site na Gondwana, mana nkewa nke ala a dugara na ntopute abụọ ọhụụ: Africa nke taa na South America nke oge a, si otú a gbanwee ụzọ osimiri ahụ na ọdịdị nke mmiri ndị ọzọ. Osimiri Congo mere ọdịdị ya n'oge Pleistocene n'etiti 150.000 na 200.000 afọ gara aga.
Osisi ala na anumanu nke Osimiri Congo
N'ihi ihu igwe na-ekpo ọkụ ebe osimiri dị na ọtụtụ mineral ndị mmiri na-enye site na mpaghara ọ bụla mmiri gbara gburugburu, ọ nwere nnukwu ọgaranya nke ọtụtụ ihe ndụ. Ọtụtụ narị ụdị azụ dị iche iche na-egwu mmiri na mmiri ya na 7 n'ime ezinụlọ iri na-azụ azụ na Lake Tanganyika agbanwewo na mmiri ya. Azụ kachasị dị na ezinụlọ Ciclidae, Mormyridae, Characidae, Distichitodontidae, Mochokidae, Bagridae, Cyprinidae na Siluriformes. Agụ iyi na turtles, dị ka ọtụtụ primates na mmiri mmiri na-achọta ụlọ ha zuru oke na mmiri mmiri ha.
N'ime ahịhịa ndị dị na mmiri a na-ahụ hyacinth, lili na ferns aquatic na-apụta.
Osimiri Congo abụrụla ụzọ njem maka ndị Bantu oge ochie. Ọ bụkwa ebe a na-enweta nri maka agbụrụ niile dị nso. Mkpa akụ na ụba ya yiri nke Osimiri Naịl. Ndị na-eme nchọpụta na Europe esila ọtụtụ n'ime ụzọ gasị ya ha ka jikọtara obodo na obodo taa n'ihi enweghị ụzọ dị mma na mpaghara ahụ. A na-ebufe ngwaahịa dịka shuga, kọfị, owu, ọla kọpa, na mmanụ nkwụ site n'otu ebe ruo ebe ọzọ, wee ruo n'oge na-adịbeghị anya, ụgbọ mmiri bụ ụzọ kachasị mkpa iji ebugharị osimiri.
Ihe karịrị nde mmadụ 75 na-adabere na akụ nke Osimiri Congo, gụnyere ọgwụ, mmiri, akụrụngwa akụrụngwa, ebe obibi yana, n'ezie, nri. Emeela ọdọ mmiri dị iche iche na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik n'akụkụ mmiri iji nye ụmụ mmadụ ọkụ eletrik.
Fishfọdụ azụ, dị ka ndị nọ na otu Protopterus, Parachanna, Bagridae, Characidae, na Distichodontus, nwere ike ibute site n'ịkụkarị azụ, iwebata ụdị ụmụ amaala Congo na-abụghị nke ha, na igbukpọsị ọhịa. Mkpochapu osisi na iji mmiri eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi na-ebelata ogo nke mmiri na ihe ndị dị ndụ na ha.
Ọhịa nke osimiri Congo kpokọta 8% nke carbon niile echekwara n'ime ọhịa ụwa, na-eme ka ọ bụrụ ọdọ mmiri carbon ka ukwuu na Africa na nke anọ na ụwa. Agbanyeghị, ihe dịka 85% nke oke ọhịa a ka ebibiela ma na-etinye oke osisi ndị ọzọ egwu. Atụmatụ atụmatụ igbu osisi na Central Africa na 2050 na-ebu amụma na ọ bụ naanị n'ime Democratic Republic of the Congo ga-ewepụta ijeri carbon dioxide 34,4.
Ọtụtụ iri nde mmadụ na-adabere n'oké ọhịa iji dịrị ndụ. Na Democratic Republic of Congo naanị, nde mmadụ iri anọ bi n'oké ọhịa ndị a. N’akụkụ ụwa a, ọdịbendị niile na-ebi site na oke ọhịa maka ebe obibi, ahụike, nri, yana ọdịnala na mmụọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Osimiri Congo na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Rịo Congo